Maanta oo kale maxaa dhacay? (Marqaati gacan 1-aad ah oo sharraxaya wixii dhacay) | Hadalsame Media
Home Taariikh Maanta oo kale maxaa dhacay? (Marqaati gacan 1-aad ah oo sharraxaya wixii...
Maanta oo kale maxaa dhacay? (Marqaati gacan 1-aad ah oo sharraxaya wixii dhacay)
(Hadalsame) 11 Agoosto 2020 – 13 Sano ayaa laga jooga maanta oo kale 11 Agoosto 2007-kii markii isku maalin la dilay saxiibkey Mahad Axmed Cilmi iyo Cali Imaan Sharma’arke oo labaduba ahaayen masuuliyiin iyo saaxibo aan mudo isla soo shaqeeynay.
Subax aroor ah ayeey aheyd abaaro sideedi oo labatan la’ 07:40 daqiiqo, waxaan gaari ku soo maray wadada ifka Xalan ee jidka warshadah, waxaan gaariga daaqadiisa ka arkay saxiibadey Mahad iyo Seynab Abukar iyo Iidle oo ku lugooynayo wadada bacaadka ah ee ifka xalane meel aan ka fogeeyn xaruntii Hornafrik oo aan u shaqo tagi jirnay malin walbo, gacanta ayaan u haatiyay iyaguna gacanta ayeey ii haatiyeen iyagoo dhoola cadeynayo.
Waxaan gaaray albaabka Hornafrik oo aan gaariga uga dagay, durbadiiba waxey indhaheygu qabteen labo wiil oo dhallinyaro ah oo darbi ka soo horjeeday Hornafrik ka soo kacay oo dhankeyga soo aaday, tuhun ayaa i galay, gaarigii aan ka dagay hortiisa intan maray ayaan galay albaabka oo ii dhawaa anigoo gadaal u soo fiirinaya, indhaheyga waxay qabteen iyagoo gadaal ugu laabtay meeshey ka soo kaceen.
Waxbo uma arag shaqadeeydii ayaan iska galay, daqiiqado yar kaddib waxaa nasoo gashay Seynab oo noo sheegtay wiilal bistoolado wato in ay Mahad wadada ku dileen waa halkii aan dhawaan soo maray, qaracan ayaa nagu dhacay, Mahad isbitaalka ayaa loola cararay nafna lalama gaarsiin.
Subax murugo xambaarsan ayeey aheyd, Cali Imaan oo agaasimaha idaacada ahaa ayaa iigu soo galay studiaha anigoo ooyaya, waxaa la garay sideedi subax nimo xiligii warka subax ee idaacad, wuxuu igu yir adiga warka aqri, madaama aan ahaa tifaftiraha wararka idaacada waxaadna sheegta oo kaliya geerida mahad idacadana qur’aan halla saaro mudo sadax maalmood ah oo baroordiiq ah, sidiii ayana yeelay.
Kaddib maxaa dhacay?!
La soco qeybta labaad iyo aaskii Mahad iyo qaraxii Cali Iiman, ee qabuuraha Barakaad iyo dareenkii aan maalintaas qaaday oo igu kaliftay in dhowr iyo toban maalmood kadib dalka isaga soo hayaamo.
Walaalayaal aan u duceeyno Cali iyo Mahad gacan ka xaqdaran ayaa dishaye.
Waxaa Qoray: Xasan Muuse Sabriye
Previous article”Yaa taaban kara!” – Turkiga oo maraakiib dagaal ku gelbiyey markab shidaal ka baaraya Bariga Badda Dhexe & Giriig oo ka xumaaday
Next article”Waxaa tihiin boqortooyo qabali ah oo aan qaran adag lahayn!” – Turkiga oo u digey Imaaraadka